people Nepal » मकैको जुँगाको फाइदा : ८ रोग निवारण गर्न सकिने ! मकैको जुँगाको फाइदा : ८ रोग निवारण गर्न सकिने ! – people Nepal
मकैको जुँगाको फाइदा : ८ रोग निवारण गर्न सकिने !
Posted on July 8, 2018 July 8, 2018 by Tara Nidhi
मकै संसारमा सबै भन्दा धेरै क्षेत्रफलमा लगाईने तथा सबै भन्दा धेरै खपत हुने बालीमा पर्दछ । बहु उपयोगि, यो बाली बाट, बिभिन्न परिकार, तेल, इन्धन, चीनी, रक्सी आदि बनाउने गरिन्छ । धेरै मानिसहरुले उसिनिएका मकै वा पोलिएका मकै खान मन पराउंछन् । यस किसिमका मकै खाएमा स्वास्थ्यका लागि धेरे फाइदा हुन्छ ।
अघि बढेको बिकासको रेललाई रोक्न खोज्नेलाई इतिहासले भित्तामा पुर्याउने: महेश बस्नेत